सुडानमा लुटियो नेपाली प्रहरीको १५ लाख • Pokhara News by Ganthan
सुडानमा लुटियो नेपाली प्रहरीको १५ लाख
प्रकाशित २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
२५ वैशाख, काठमाण्डौं । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा शान्ति स्थापनामा खटिएका नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु लुटिएका छन् । एके ४७ सहित आएका लुटेराले नौ जना प्रहरी अधिकारीको निवास नै कव्जामा लिएर लुटपाट गरेका थिए ।
हतियारधारी समूह मंगलबार बिहान सुडानको नैलास्थित नेपाली प्रहरीको क्याम्पमा प्रवेश गरेको थियो । एके ४७ बोकेका सातजनाले मार्ने धम्की दिएपछि नेपाल प्रहरी अधिकारीले आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
त्यहाँ सल्लाहकारका रुपमा काम गर्ने प्रहरीलाई हतियार राख्ने सुविधा हुँदैन् । उनीहरुलाई राष्ट्रसंघले बस्ने ठाउँको पनि व्यवस्था नगर्ने भएकाले कोही होटलमा त कोही घर भाडामा बस्दै आएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
स्रोतका अनुसार विहान ३ः३५ मा आएका लुटेराले सवा ४ बजे सामान लिएर फर्केका थिए । उनएहरुले १५ लाख बराबरको धनमाल लुटेको प्रहरीले बताएका छन् । लुटिएका एक प्रहरीले भने, ‘आत्मसमर्पण नगरेको भए, ज्यान जान्थ्यो, सात जना लुटेरा मध्ये पाँचजनाको हातमा एके ४७ हतियार थियो ।’
चीनलाई हात्ती र चेक गणतन्त्रलाई पान्डा उपहार !
फेसबुकबाटै मायालुको टुंगो
सेलवेज ग्रुपले कोरोना राहत कोषमा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ४३ नमुना संकलन २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
पोखरा ५ मा राहत लिन भिड, प्रहरी लगाए भगाउनु प¥यो २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
New Delhi : 2000 people attendingamuslim program suspected of Coronavirus, 300 hospitalized २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
When will the vaccine for novel-coronavirus be ready? २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
पोखरा आइपुग्यो कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन, आजबाटै कोरोना परीक्षण थालिने २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का २१ नमुना परीक्षणलाई काठमाडौ पठायो २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
कोरोनाबाट एकै दिन ३७ सयको मृत्यु, स्पेनमा ९१३, अमेरिकामा ५६५ को मृत्यु २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
गण्डकी सरकारको आपतकालीन कोषमा युनाईटेडको १ लाख सहयोग २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३
कोरोना संक्रमित बागलुङकी युवतीको परिवारका सदस्य र साथीहरुको नमुना संकलन २५ बैशाख २०७०, बुधबार ०८:१३